I-SOICARE 100% yeoyile efanelekileyo yokunyanga iBanga leAromatherapy yeoyile yeTyhefu, iTshayina i-SOICARE i-100% yeoyile efanelekileyo yokuNyanga iBanga leAromatherapy yeoyile yabavelisi beDifisi, abaXhasi, abaFektri -Sunpai Industries Limited
22 * 10 * 4.5 cm / 6 Amacandelo
Iziqephu ze-300000 ngenyanga
● (1) Umgangatho wePremiyamu Aromatherapy Oils Ebalulekileyo iseti yeePhezulu ezi-6; Zonke iioyile zethu ziyinyani, zezendalo, ezingenacocwa, ezingangxengwanga, ezingezongezo, ezingazalisi;
● (2) Top IAromatherapy OIls: ILavender, iorenji, iPepermermint, iLemon Ingca, Umthi weti kunye neEucalyptus;
● (3) ISILUMKISO NGOKHUSELEKO: Ukusetyenziswa kwangaphandle kuphela. Ngaphandle kwe-aromatherapy, thenga ngeoyile yenethiwekhi. Ukusetyenziswa kwesihloko, gcoba isixa esincinci kakhulu ngaphakathi kwendawo yengqiniba yakho ukuvavanya nayiphi na into engahambi kakuhle ngaphambi kokusetyenziswa. Yeka ukusetyenziswa xa ungonwabanga okanye ukuba kukho ukucaphuka. Gcina kwindawo ekungafikelelwa kuyo izilwanyana zasekhaya; Iikati zinokuba novakalelo ngakumbi kwioyile ezifanelekileyo. Kuphephe ukunxibelelana namehlo, gcina kude nokufikelela kwabantwana;
● (4) Ukukhetha ngononophelo kweeoyile kuseto lweeoyile eziBalulekileyo kusekwe kwiimpawu zabo kunye nezibonelelo kunye nokukwazi kwabo ukudibanisa kunye nokukhetha kwakho okhethekileyo kunye neemfuno zonyango. Iseti yeoyile ebalulekileyo ibandakanya izinto eziphambili ukuze ukwazi ukwenza uhlobo lwakho lomxube onamandla.;
● (5) Iibhotile zeAmber zokucoca ukukhanya;
●(6) Ivumba elithandekayo: I-tea trea, i-lemongrass, i-lavender, i-eucalyptus, i-orenji emnandi, i-peppermint, i-Cinnamon, i-Bergamot, i-Lemonrass, i-Peppermin, i-grapefruit, i-Lavender, i-Rosemary, i-Eucalyptus,
Iorenji emnandi, iLamuni, umthi wePine, intlaka yempepho.
100% neeoli ezixabisekileyo
Iziqwenga ezi-6 / ibhokisi